Top 15 ịnyịnya ndị kasị ọnụ ahịa n'ụwa
N'eziokwu, ịnyịnya ndị na-efu ọtụtụ nde mmadụ adịghị ọtụtụ, ọ bụghị ihe karịrị mmadụ iri na abụọ n'ime ụwa.
Ụdị ịnyịnya nke kachasị oké ọnụ bụ agbụrụ Bekee (British), ya na njem Arabian na-aga. Ụgbọ ịnyịnya ndị a kachasị ngwa ngwa, nke kachasị ngwa ngwa, na ihe ụmụ ha na-eri ga-eru ruo nde $ 1. A na-ere ịnyịnya dị oké ọnụ ahịa maka $ 40.
N'ikpeazụ, ịnyịnya ịnyịnya na-agba ịnyịnya nke Russia nwere ike iru ego ruru puku asatọ na iri ise na ise, ụdị nke Britain - ihe dịka puku dollar abụọ na iri puku abụọ na iri ise. + Ndị ịnyịnya na-ekere òkè na ụdị ụgbọ elu ndị ọzọ ga-efu ihe dị ka puku dollar ise. banyere udiri anumanu nke uwa, mgbe ahu ego efu adighi karia puku dolla 3, ndi na-acho ugbua abaghi ​​uru.
Ma ebe a ị ga-ahụ nanị ịnyịnya kachasị ọnụ ahịa n'ụwa niile.
15. ude mmiri
Ọnụ Arabian nke agba chaa chaa chaa chaa, nke nke a na-azụta site na Count Orlov n'onwe ya maka 60,000 rubles. ọbụna na narị afọ nke iri na asatọ, ma ọ bụ karịa na 1774. Maka oge ndị ahụ ọ bụ ọgaranya. Aha ịnyịnya ahụ bụ Smetanka, maka agba ya mara mma. N'agbanyeghị, ọ bụ site na ịnyịnya a na akụkọ ihe mere eme nke ịzụlite Orlov trotter malitere, nke taa bụ ama ọ bụghị nanị na Russia.
Onye na-azụ Belgian kasị dị oké ọnụ ahịa n'akụkọ ihe mere eme bụ ebe a na-akpọ Silach. Na mmalite narị afọ nke iri abụọ, otu onye na-ewu ụlọ nke Australia nyere ya maka $ 47.5. Ruo ugbu a, ọ dịghị ụgbọ ala dị ukwuu e rere karịa Silach.
13. Ngwongwo edozi
Ụkwụ ọzọ dị oke ọnụ bụ ịnyịnya na Instebleshad nke Ramzan Kadyrov. Ụlọ ọrụ Volgograd na-ere ya na isi nke Chechen Republic maka puku dollar 300. Taa - nke a bụ ịnyịnya dị oké ọnụ na Russia, dịka ndebanye aha ndị ahịa na Russia.
12. Nwee obi ụtọ
A na-ere ịnyịnya na-agba ọsọ America nke dị na Kentucky maka ọkara nde dolla na Todd Pletcher. N'ọrụ ọrụ Ya ugboro ise meriri agbụrụ ahụ, na-akpata ya $ 2 nde, ebe ọ kwụrụ ụgwọ ya ma weta ndị nwe ya uru.
Onye mmeri ukwu Germany bụ Lord Sinclair, onye mmeri nke Na-eto Eto Na-eto Eto abụọ. Onye ọ bụla n'ime ụmụ ya iri abụọ ruru $ 1.6 nde.
Nke a na 2003 bụ onye mmeri nke mmeri na Germany ma bụrụ njem nke ụwa. N'ebe a na-ere ahịa na PSI, a na-ere ụlọ ahịa ahụ maka $ 3.3, n'oge ahụ ego a bụ ihe ndekọ.
A na-atụle Sarda na-atụghị anya ya na akụkọ ntụrụndụ na $ 3.5 nde. Ọ bụ onye mmeri nke ọtụtụ agbụrụ, ebe o debere ihe ndekọ ụwa, 8 n'ime ha ruo ugbu a, "ọ dịghị onye na-akwagharị". Obu mmeri o meriri n'ime afo abuo na afo 1965.
E rerere onye ọzọ na-edekọ ihe maka nde $ 4. Ogige ahụ na-efu ego ya, n'ihi na ọ bụ onye mmeri zuru ezu maka imeri ebe dị otu kilomita n'etiti ndị agha, oge ya dị 1 nkeji 51 sekọnd na 1994.
7. Ogwe Ihe Ike
Stallion Mystic Park mgbe ọ dị afọ atọ amaolarị ọtụtụ mmeri n'ọsọ egwuregwu dị iche iche. Na 1982, Lana Lobell zụtara ịnyịnya ahụ maka $ 5 nde.
6. Ndị isi
A na-ere Nlekọta Akpụkpọ ụkwụ nke England maka $ 6.08 nde. Nke a dị mma bụ onye na-eto eto na onye mmeri n'ọsọ.
5. Ịgba Ọsọ Seattle
A zụrụ Egwuregwu Na-ahụ Maka Seattle na 1985 maka ego ịnyịnya ibu - $ 13.1 nde. Nke a bụ akụkọ kachasị elu maka ịnyịnya n'oge ahụ. Ụdị ego dị otú ahụ maka njem a bụ n'ihi na ọ bụ onye a ma ama nke na-emeri ịnyịnya ugboro atọ n'ịgba ịnyịnya ịnyịnya mba.
4. Egwu Green
Maka otu ihe ahụ dịka ụgbọ elu gara aga, n'afọ 2006, a na-ere ahịa ịnyịnya ibu dị oke ọnụ - maka $ 16. N'oge a na-ere ihe, ọ dịghị esonye na agbụrụ, mana e nwere ọtụtụ ndị mmeri nke agbụrụ dị iche iche na ezinụlọ ya.
A na-ere ihe ntanye na-egbuke egbuke, onye na-eji ịnyịnya na-acha uhie uhie na àgwà ndị mara mma ma na-egbukepụ egbukepụ site na aha Annihilator aha aha pụrụ iche maka nde dollar 19 na 1989.
2. Sharif Dancer
Nnukwu dị oké ọnụ ahịa, nke na-emeghị ka olileanya nke ndị nwe obodo ahụ bụrụ eziokwu, bụ onye agbụrụ nke ndị England bụ Sharif Dancer, bụ onye ọnụ ahịa ya n'oge ire ere bụ $ 40. Ọ bụ otu ìgwè mmadụ niile zụtara ya, na-ekewa ego a n'òkè. Ọnụahịa a maka ịrị elu a ruru nde 40 mgbe nnukwu nnukwu mmeri na 1983 na Irish Derby Stakes na Eze Edward VII Stakes. Otú ọ dị, mgbe ire ere ahụ gasịrị, steed ahụ enwekwaghị agbụrụ. O nwere ike ọ gaghị agbanwe ndị nwe ya?
Ezigbo ụgbọ ịnyịnya na ụwa dum na n'akụkọ ihe mere eme bụ ọkpụkpụ nke agbụrụ ndị England na-akpọ Frenkel. A na-eme atụmatụ ya na ego dị egwu nke nde $ 200. Ụgwọ a kwesịrị ekwesị, ebe ọ bụ na ịnyịnya adịghị emeri ọrụ ya. Ọ meriri iri na anọ na agbụrụ kachasị mma. Mana, ma eleghị anya, a gaghị ere ịnyịnya a mara ama na nke a na-apụghị imeri emeri, ebe onye nwe ya bụ Khalil Abdul agaghị etinye mgbatị ya. Na agbụrụ, ọ gakwaghị etinye aka na, ma eleghị anya, ga-abụ onye mmepụta ọkachamara.
Nwa nwa na-emetụ egwu na enyi enyi svenik
Ugbo ahihia ndi a di na ugbo abiala ngwa ngwa iji mee gi obi uto!
30 nwamba nwamba na uzo nke abuo
Eziokwu iri isii na-egosi na ndụ agbanwewo n'ụzọ dị irè karịa afọ iri gara aga
18 nke ihe ngbaghara kachasị mma na ụwa
16 ụzọ pụrụ iche iji eji ihe oriri
12 engineering masterpieces, nke ị na-enweghị ike iche banyere!
Ụmụ anụmanụ ahụ bịara na-ekele gị, nke ahụ bụ ihe kachasị mma ị ga-ahụ taa!
Nke a na-atụ egwu na-azọpụta ndụ nwatakịrị ahụ!
Ndị a 35 rabbits ga-eme ka ụbọchị gị a obere mma!
Ụmụ anụmanụ iri atọ, ndị ejidere gizmos!
18 ihe atụ na-akọwa echiche nke ụbọ ọbọ
Nkita gị ga-enwe obi ụtọ: obere ụlọ maka anụ ụlọ
Nnukwu akpịrị akpịrị
Ihe ndekọ nke Shakira
Ogige na-ekpo ọkụ na Bali
Colours maka ime - nhọrọ oke dị n'ime ụlọ maka ụra na izu ike
Luffa - kụrụ ma lekọta
Ọ ga-ekwe omume ime shuga mgbe ị dị ime?
Kedu esi eji aka gị mee akpa akwụkwọ?
Adjika si na ose chili maka oyi
Manto nke faux aji
Mangosteen maka ọnwụ ọnwụ
Ke mbiet ye ke mbiet: Kanye West mere a edozi isi na-acha ọcha pink ntutu, dị ka Kim Kardashian
Kedu otu esi eme ka egwuru egwu mara mma?
Ekekere na mgbidi na ncha
Ihe Ndepụta Ngwaahịa
Onye ikpe mara Kniraley mara na a ga-enye ya ọgwụgwọ nke ọrịa uche
Egwuregwu asọmpi maka ụmụaka na n'okporo ámá n'oge okpomọkụ
Blouses si chiffon 2014
Yangon Ebe nkiri